လူပြိုကွီး အပြိုကွီးမြား ကှယျလှနျခဲ့လြှငျ ငှကျပြောတုံး ထညျ့ရခွငျး ရဲ့ အကွောငျးရငျး ( မသိသေးသူတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးပါ ) – Shwe Naung
လူပြိုကွီး အပြိုကွီးမြား ကှယျလှနျခဲ့လြှငျ ငှကျပြောတုံး ထညျ့ရခွငျး ရဲ့ အကွောငျးရငျး ( မသိသေးသူတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးပါ )
Shwe Thuta | November 19, 2020 | Knowledge | No Comments
အှနျလိုငျး ပျေါမှာ အသကျ ၈၇ နှဈအပြိူ ကွီး အခေါငျးထဲငှ ကျပြောတုနျး ထညျ့ခွငျးနဲ့ ပကျသကျပွီး ထညျ့ရတဲ့အနှဈအ စဈကို ပွောခငျြလို့ပါလူပြိုကွီး အပြိုကွီးသဆေုံးခွငျးနှငျ့ ငှကျပြောတုံး မညျသို့ ပတျသတျပါသနညျး ..? အားလုံးလိုလို ပွောဆိုစနောကျနကွေတဲ့ ဟာသစကားလေး တဈခှနျး ကသရေငျ ငှကျပြောတုံးဖ ကျနရေမယျ နျော ဆိုတဲ့ ကြီစယျမှုလေးကွောငျ့ တဈယောကျစ တဈရာဆိုသလို တဈယောကျက စလို့ သူစ ကိုယျစနဲ့ လူပြိုကွီး အပြိုကွီးတှေ အတှကျငှ ကျပြောတုံးက စ,စရာတဈခု ဖွဈလာခဲ့တာထငျပါတယျ ။
သာမာနျအမွငျအယူ အစအနနေဲ့ငှကျပြော တုံးကပဲ သသေူအတှကျ အဖျောဖွဈစသေလို လို ၊ဒီဘဝ အိမျထောငျ မကပြဲသသှေားရလို့နော ကျနောငျဘဝတှေ အတှကျအိမျထောငျကအြောငျဓာတျရိုကျဓာတျဆငျသဘောနဲ့ ယတွာခတြောလိုလိုဒီလိုပဲ ထငျမွငျနကွေတာပါ ။ဒီကိစ်စနဲ့ ပကျသကျပွီး ဒီနလေူ့မှုကှနျယကျပျေါမှာ မွငျတှနေ့တေဲ့ သဆေုံးသူနဲ့ ငှကျပြောတုံးပုံတှကေိုတခြို့က ဟာသအဖွဈနဲ့ တငျထားကွတာ တှရေ့ပွီးတခြို့ကလညျး လကျခံစရာမရှိကွောငျးရေးတငျထားကွတာ တှရေ့တယျ ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈယခုပုံပါ အခငျးဖွဈရာဒသေရဲ့ အယူအစှဲက ဘယျလိုကွောငျ့ အခုလို ငှကျပြောတုံးထညျ့တာလဲ ဆိုတာတော့ မသိနားမလညျပါဘူး ။ ဒါပမေဲ့ ငှကျပြောတုံးဟာလူပြိုကွီး အပြိုကွီး ဖွဈခွငျးနဲ့ မဆိုငျပါဘူး ။လူသားအားလုံးအတှကျ ဥပမာပွထားတဲ့ ပစ်စညျးတဈခုလို့ ပွောလို့ရမယျ ထငျပါတယျ ။သီတဂူဆရာတျောဘုရားကွီး ရဲ့ ဘဝတနျဖိုး တရားတျောထဲမှာ“ အနိစ်စ အခကျြ မပွတျနှိပျစကျတဲ့ ခန်ဓာ ဒုက်ခ အခကျြ မပွတျနှိပျစကျတဲ့ ခန်ဓာ အနတ်တ အခကျြဖွငျ့ မပွတျနှိပျစကျနတေဲ့ ခန်ဓာ ဘာမြား အနှဈသာရ ရှိသေးလညျး ။
မကွာခငျ ပဈရတော့ မယျ ။ ငှကျပြောတုံး အခှံတှေ ခှါ ခှါ လိုကျတိုငျး ခှါ လိုကျတိုငျး အပျေါက တဈဖတျခှါလိုကျလညျး အခှံပါပဲ ။ နောကျတဈဖတျခှါလိုကျလညျး အခှံပါပဲ ။ ခှါရငျး ခှါရငျး နဲ့ အခှံ ခညျြးပဲ ထှကျတယျ ။ အနှဈ မရပါဘူး ။ဒီခန်ဓာကိုယျကွီး ဟာ ငှကျပြောတုံး နဲ့ မခြားဘူး လို့ သဘောကျ ။ရူက်ခန်ဓာ တဈဖတျ ခှါ အကာပဲ ။ဝဒေနာက်ခန်ဓာ တဈဖတျ ခှါ ၊ သညာက်ခန်ဓာ သင်ျခါရက်ခန်ဓာ ၊ ဝိညာဏက်ခန်ဓာ တဈထပျစီ တဈထပျစီ ခှါ ၊ ခှါ ခငျြတိုငျး ခှါ ၊ ငှကျပြောတုံး လိုပါပဲ ။ အကာခညျြးပဲ ထှကျတယျ ။
မကွာခငျ သုဿနျမှာ ပဈရတော့မယျ ။ ဘာမြား အနှဈ ရှိလဲ …?ဒီခန်ဓာ အနှဈ ရှိတယျ ထငျပွီးတော့ မှမျးမံ ပွငျဆငျနရေငျအကာကိုတှယျတာမကျမောနကွေတာ ။ခန်ဓာကိုယျ ရဲ့ အနှဈဟာ ဘာလဲ ..?အနိစ်စ ဖွဈတာ ဖွဈမှနျး သိအောငျ ကွညျ့ ။အနိစ်စာနုပဿနာဉာဏျ ရရငျ အနှဈ ။ဒုက်ခ ဖွဈတာ ဖွဈမှနျး သိအောငျကွညျ့ ။ဒုက်ခာနုပဿနာဉာဏျ ရရငျ အနှဈ ။အနတ်တ ဖွဈတာ ဖွဈမှနျး သိအောငျကွညျ့ ။အနတ်တာနုပဿနာဉာဏျ ရရငျ အနှဈပါပဲ ။အဲ့ဒါ ဘဝမှာ တနျဖိုးရှိတဲ့ အနှဈလို့ သဘောကြ ။
ဒီအနှဈကို ရရငျလူ့ဘဝမှာ နရေကြိုး နပျပွီ ။သရေကြိုး နပျပွီ ။ဒီအနှဈမှ မရရငျ ဘဝမှာ နရေကြိုးလညျးမနပျ ၊ သရေကြိုးလညျး မနပျဖွဈလိမျ့မယျ ´´ လို့သီတဂူဆရာတျောကွီး၏ ဘဝတနျဖိုးစာအုပျ/နှာ ၅၇ ဟောကွားထားတာ ရှိပါတယျ ။ဒါကွောငျ့ အိမျထောငျမကပြဲ သဆေုံးရလို့ ငှကျပြောတုံး ထညျ့ရခွငျးမှာအကွောငျး ဆကျစပျမှု မရှိသလိုသဘောမပါသညျ့အပွောဟာသတဈခုသာဖွဈပါတယျ ။
အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ အသက် ၈၇ နှစ်အပျိူ ကြီး အခေါင်းထဲငှ က်ပျောတုန်း ထည့်ခြင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ထည့်ရတဲ့အနှစ်အ စစ်ကို ပြောချင်လို့ပါလူပျိုကြီး အပျိုကြီးသေဆုံးခြင်းနှင့် ငှက်ပျောတုံး မည်သို့ ပတ်သတ်ပါသနည်း ..? အားလုံးလိုလို ပြောဆိုစနောက်နေကြတဲ့ ဟာသစကားလေး တစ်ခွန်း ကသေရင် ငှက်ပျောတုံးဖ က်နေရမယ် နော် ဆိုတဲ့ ကျီစယ်မှုလေးကြောင့် တစ်ယောက်စ တစ်ရာဆိုသလို တစ်ယောက်က စလို့ သူစ ကိုယ်စနဲ့ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေ အတွက်ငှ က်ပျောတုံးက စ,စရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တာထင်ပါတယ် ။
သာမာန်အမြင်အယူ အစအနေနဲ့ငှက်ပျော တုံးကပဲ သေသူအတွက် အဖော်ဖြစ်စေသလို လို ၊ဒီဘဝ အိမ်ထောင် မကျပဲသေသွားရလို့နော က်နောင်ဘဝတွေ အတွက်အိမ်ထောင်ကျအောင်ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်သဘောနဲ့ ယတြာချေတာလိုလိုဒီလိုပဲ ထင်မြင်နေကြတာပါ ။ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒီနေ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ မြင်တွေ့နေတဲ့ သေဆုံးသူနဲ့ ငှက်ပျောတုံးပုံတွေကိုတချို့က ဟာသအဖြစ်နဲ့ တင်ထားကြတာ တွေ့ရပြီးတချို့ကလည်း လက်ခံစရာမရှိကြောင်းရေးတင်ထားကြတာ တွေ့ရတယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုပုံပါ အခင်းဖြစ်ရာဒေသရဲ့ အယူအစွဲက ဘယ်လိုကြောင့် အခုလို ငှက်ပျောတုံးထည့်တာလဲ ဆိုတာတော့ မသိနားမလည်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ငှက်ပျောတုံးဟာလူပျိုကြီး အပျိုကြီး ဖြစ်ခြင်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ။လူသားအားလုံးအတွက် ဥပမာပြထားတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရမယ် ထင်ပါတယ် ။သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ရဲ့ ဘဝတန်ဖိုး တရားတော်ထဲမှာ“ အနိစ္စ အချက် မပြတ်နှိပ်စက်တဲ့ ခန္ဓာ ဒုက္ခ အချက် မပြတ်နှိပ်စက်တဲ့ ခန္ဓာ အနတ္တ အချက်ဖြင့် မပြတ်နှိပ်စက်နေတဲ့ ခန္ဓာ ဘာများ အနှစ်သာရ ရှိသေးလည်း ။
မကြာခင် ပစ်ရတော့ မယ် ။ ငှက်ပျောတုံး အခွံတွေ ခွါ ခွါ လိုက်တိုင်း ခွါ လိုက်တိုင်း အပေါ်က တစ်ဖတ်ခွါလိုက်လည်း အခွံပါပဲ ။ နောက်တစ်ဖတ်ခွါလိုက်လည်း အခွံပါပဲ ။ ခွါရင်း ခွါရင်း နဲ့ အခွံ ချည်းပဲ ထွက်တယ် ။ အနှစ် မရပါဘူး ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး ဟာ ငှက်ပျောတုံး နဲ့ မျခားဘူး လို့ သေဘာက် ။ရူက္ခန္ဓာ တစ်ဖတ် ခွါ အကာပဲ ။ဝေဒနာက္ခန္ဓာ တစ်ဖတ် ခွါ ၊ သညာက္ခန္ဓာ သင်္ခါရက္ခန္ဓာ ၊ ဝိညာဏက္ခန္ဓာ တစ်ထပ်စီ တစ်ထပ်စီ ခွါ ၊ ခွါ ချင်တိုင်း ခွါ ၊ ငှက်ပျောတုံး လိုပါပဲ ။ အကာချည်းပဲ ထွက်တယ် ။
မကြာခင် သုဿန်မှာ ပစ်ရတော့မယ် ။ ဘာများ အနှစ် ရှိလဲ …?ဒီခန္ဓာ အနှစ် ရှိတယ် ထင်ပြီးတော့ မွမ်းမံ ပြင်ဆင်နေရင်အကာကိုတွယ်တာမက်မောနေကြတာ ။ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ အနှစ်ဟာ ဘာလဲ ..?အနိစ္စ ဖြစ်တာ ဖြစ်မှန်း သိအောင် ကြည့် ။အနိစ္စာနုပဿနာဉာဏ် ရရင် အနှစ် ။ဒုက္ခ ဖြစ်တာ ဖြစ်မှန်း သိအောင်ကြည့် ။ဒုက္ခာနုပဿနာဉာဏ် ရရင် အနှစ် ။အနတ္တ ဖြစ်တာ ဖြစ်မှန်း သိအောင်ကြည့် ။အနတ္တာနုပဿနာဉာဏ် ရရင် အနှစ်ပါပဲ ။အဲ့ဒါ ဘဝမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အနှစ်လို့ သဘောကျ ။
ဒီအနှစ်ကို ရရင်လူ့ဘဝမှာ နေရကျိုး နပ်ပြီ ။သေရကျိုး နပ်ပြီ ။ဒီအနှစ်မှ မရရင် ဘဝမှာ နေရကျိုးလည်းမနပ် ၊ သေရကျိုးလည်း မနပ်ဖြစ်လိမ့်မယ် ´´ လို့သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ ဘဝတန်ဖိုးစာအုပ်/နှာ ၅၇ ဟောကြားထားတာ ရှိပါတယ် ။ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်မကျပဲ သေဆုံးရလို့ ငှက်ပျောတုံး ထည့်ရခြင်းမှာအကြောင်း ဆက်စပ်မှု မရှိသလိုသဘောမပါသည့်အပြောဟာသတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ် ။
ပုံပွငျထဲက မြောကျတှေ အပွငျမှာ တကယျရှိနကွေပါတယျ …